Katoomba Studio 4 - Ifulethi Elihle 2 Elinezitolo - I-Airbnb
Katoomba Studio 4 - Ifulethi Elihle 2 Elinezitolo
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Danni
I-Chic ne-studio sesimanje esinezitolo ezingu-2 esinezindawo ezinhle zangaphandle, esikude ne-Scenic World, i-KCC ne-Massachusetts. Iseduze ngqo ne-Narrow Imperau emangalisayo enamathrekhi okuhamba emahlathini eduze. Sikumema ukuthi unethezeke ezindaweni ezizungezile ze-studio sethu. Kungakhathaliseki ukuthi uchithe usuku olunzulu uhamba ngezinyawo noma umane nje uhamba ezindaweni zasendaweni, siqinisekile ukuthi uzojabulela ukuhlala kwakho endaweni esikude nasekhaya.
Sisanda kuyilungisa ngokuphelele i-Studio eyenza ibe yindawo ethokomele, ezolile enefenisha yesimanje, lapho sithemba ukuthi izivakashi zethu zizozizwa zikhululekile. Sithathe isikhathi sokucabangela zonke izici zalokho esikujabulelayo lapho sisebenzisa i-Airbnb futhi siye sazama ukuzifaka ku-Studio sethu. Siyethemba ukuthi uyayithanda njengathi.
I-HDTV engu-55" ene- I-Netflix, Disney+, I-Amazon Prime Video
I-Katoomba ibungaza imikhosi ehlukahlukene kanye nemicimbi onyakeni wonke kuhlanganise ne-Winter Magic, i-Lady Luck, i-Blue Mountains Music Festival, i-Lakefest, i-Wines of the West, i-6 foot track marylvania ne-Trail Australia. Amabha namathilomu agcwele.
Sifake ikhophi ye-Best Blue Mountains Bush-walks ku-Studio ukuze uhlele uhambo lwakho. Siye sahlanganisa nezindawo eziningi zokudla nokuphuza nezinto ongazenza edolobheni. Uma ungathanda ukuxhumana nami ngeminye imininingwane, ngiyakujabulela ukuza futhi ngibe nengxoxo noma nini lapho ngikhona. I-studio singemuva nje kwendlu yethu.
Sifake ikhophi ye-Best Blue Mountains Bush-walks ku-Studio ukuze uhlele uhambo lwakho. Siye sahlanganisa nezindawo eziningi zokudla nokuphuza nezinto ongazenza edolobheni. Uma unga…